“Koob aduunkani wuxuu noqon doonaa kii iigu dambeeyey: Ribery
HomeWararka Maanta“Koob aduunkani wuxuu noqon doonaa kii iigu dambeeyey: Ribery
Weeraryahanka xulka qaranka France iyo naadiga Bayern Munich ee Franck Ribery ayaa cadeeyey in koobka aduunka sanadkani noqon doono kiisii ugu dambeeyey ee uu xulkiisa u ciyaaro.
Laacibkan 31 jir ah, ayaa sanadkan safan doona tartankii saddexaad ee koob aduun ah ee uu u ciyaaro xulkiisa qaranka, isagoo hore uga soo qayb gallay koob aduunkii Xulka Talyaanigu Rigoodhayaasha kaga qaaday ee 2006 dii iyo kii ay ku hadheen wareegii ugu horeeyeyba ee Afar sanno ka hor Ka dhacay wadanka Koonfurta Afrika.
Laacibka Bayern Munich oo 35 jir noqon doona haddii uu gaadho koob aduunka kan xiga ee Ruush-ka ka dhici doona, ayaa u sheegay Idaacada RTL inuu sanadkan tartanka ka dhacaya Brazil ku soo afmeerayo koob aduunada uu qarankiisa matalo.
“Wuxuu noqon doonaa koob aduunkii iigu dambeeyey,” ayuu yidhi.
“Waa inaan halkaas u tagnaa inaan faa’iido kala soo guryo noqono, isku daynaa inaan ku guulaysano koobka aduunka, si fudud.”
France ayaa kula jirta Group E along xulalka Switzerland, Honduras iyo Ecuador.
Tababare Didier Deschamps ayaa u hamuun qaba inuu la soo noqdo natiijo ka saraysa midi 2010 kii, markaas oo tababarihii hore ee Raymond Domenech ay hadhay mashaqo ciyaaryahanada dhexdooda ahi uu dhibic kaliya ka xoog saday saddexdii ciyaarood ee uu yeeshay.
Awr Kiraaleyaal: Gary Neville Oo Wajahay Taageerayaal Gadoodsan Kadib Xasuuqii Barcelona
Maroodijeex Oo Guul Ka Gaadhay Buuhoodle + Sawiradii Ciyaarta